के तपाइ आफुलाइ कमजाेर महसुस गरिरहनु भएकाे छ ? एकचाेटी पढ्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
जिवन सधै एकै लयमा बग्दैन । हरेक दिन नयाँ नयाँ परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छन् । यस्ताे अवस्थामा कहिलेकाही अाफुलाइ एकदमै कमजाेर महसुस हुन्छ । त्याे कमजाेरपनलाइ व्यक्तिले सहि समयमा व्यवस्थित गर्न सक्याे भने त्याे एउटा सिकाइ बन्छ, बलियाेपनमा परिणत हुन्छ भने त्याे कमजाेरपनलाइ व्यवस्थित गर्न सकिएन भने जिन्दगी नै खतरामा पुग्छ ।
के तपाइ अाफुलाइ कमजाेर महसुस गरिरहनु भएकाे छ ? यि विधी अपनाउनुहाेस्
अाफुले पढिरहेकाे क्षेत्र या काम गरिरहेकाे क्षेत्रका नयाँ कुराहरू खाेजेर पढ्नुहाेस् । इन्टरनेटमा त्यस्ता कुराहरू सजिलै उपलब्ध हुन सक्छन् । अाफ्नाे काम या पढाइकाे क्षेत्रकाे नयाँ कुरा सिक्न पाउँदा तपाइमा नयाँ उत्साह जाग्छ ।
त्यस्तै, काम या पढाइमा पछि परे भनेर निराश हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहाेस्, सबैका अा-अाफ्ना विशेषता हुन्छन् । अाफ्नाे विशेषता पत्ता लगाउनुहाेस् । र, सधै याे बुझ्नुहाेस् कि, काममा मान्छे काम गर्दै गएकाे अनुभवकाे अाधारमा राम्राे देखिन्छ । नअातिनुहाेस्, कामलाइ निरन्तरता दिनुहाेस् ।
साथिहरूसँग भेटघाट गर्नुहाेस् । केही समय साथिहरूसँग बिताउने, गफ गर्ने, रमाइला पल सम्झने गर्नुहाेस् । अाफ्ना मनका कुरा एक अर्कालाइ बताउँदा मन हलुका हुन्छ, दिमाग ताजा हुन्छ र हिम्मत बढ्छ ।परिवारकाे सम्पर्कमा रहिरहनुहाेस् । परिवारका सदस्यसँग बसेर गफगाफ गर्नुहाेस् ।
घरमा सानाे तिनाे काम गर्नुहाेस् । टाढा हुनुहुन्छ भने पनि परिवाका सदस्यलाइ फाेन सम्पर्क गर्नुहाेस् । यसले तपाइलाइ भावनात्मक रूपमा बलियाे बनाउँछ ।अाफुले पछिल्लाे समयमा हासिल गरेकाे उपलब्धि सम्झिनुहाेस् र अाफ्ना अागमी याेजनाहरूलाइ सम्झेर डायरीमा टिप्नुहाेस् ।
सफलतालाइ कुनै गन्तव्यकाे रूपमा नलिइ यात्राकाे रूपमा लिनुहाेस् । यिनै अफ्ठ्यारा, चाेट, धाेका, असफलता अादिले नै तपाइलाइ बलियाे बनाउँछन्, जसले गर्दा त्याे यात्रामा हिड्न सजिलाे हुन्छ । यसले तपाइमा जिवनप्रति प्रेम हुन्छ ।जिवनकाे मुख्य व्यक्ति तपाइ हाे र तपाइकाे जिवनकाे यात्रामा अगाडी बढिरहनुभएकाे छ ।
बाटाेमा कति मान्छे भेटिन्छन्, छुटिन्छन् । त्यसैले काेही अाफ्नाे जिवनबाट गयाे भन्दैमा काजार नहुनुहाेस् । तपाइले जिवनमा गर्नुपर्ने थरप्रै कुरा छन्, पुरा गर्नुपर्ने सपना छन्, जिम्मेवारी छन्, अाफ्ना व्यक्तिगत चाहना छन् । ति कुरामा ध्यान दिनुहाेस् । जिन्दगीकाे प्राथमिकतालाइ छुट्याउनुहाेस् । तपाइ अरू कसैकाे लागी अाफ्नाे जिवन बर्बाद गर्न पक्कै जन्मनुभएकाे हाेइन ।
वृद्दाश्रम, अनाथालय, अाध्यात्मिक क्ष्रत्र, अाश्रय स्थलमा जानुहाेस् । त्यहाँ केही समय बिताउनुहाेस् । त्यसपछि तपाइले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि, तपाइसँग ति थुप्रै कुराहरू छन्, जुन अरूसँग छैनन् । यसकाे लागी विभिन्न मानिसका जिन्दगीका कथा पढ्ने, हेर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
निन्द्रा पुग्नेगरी सुत्नुहाेस् र बिहान उठेपछी याेगा व्यायाम गर्नुहाेस् । प्रशस्त पानि पिउनुहाेस् । अाफुलाइ अत्यन्तै मिठाे लाग्ने या अाफुलाइ खान मन लागेकाे कुरा खानुहाेस् । केहिसमय हरियाली भएकाे ठाउँमा गएर बस्नुहाेस् । अाफ्नाे व्याक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुहाेस् ।
घरकाे सफाइ गर्नुहाेस् । अाफ्नाे हेरचाह गर्नुहाेस् ।रून मन लागेकाे छ भने रूनुहाेस् । रूनु कुनै कमजाेरी हाेइन । यति रूनुहाेस् कि, त्यसपछि त्याे कुरालाइ सम्झेर अाँशु नै नझराेस । तपाइ हुनुहुन्छ र त तपाइकाे सँसार छ । अाफ्नाे अात्मसम्मानकाे लागी स्वार्थी पनि बन्न सिक्नुहाेस् ।
एक्लाे महसुस ? यसरी हटाउनुहाेस् एक्लाेपन, २३ उपाय, जसले जीवनभर खुसी राख्छ
मान्छे एक्लै जन्मिछ । तर जन्मिसकेपछी विस्तारै अरूकाे साथ पाउदै गर्दा उ अरूमाथी कामले मात्र नभइ भावनात्मक रूपमा पनि परनिर्भर रहन थाल्छन् । उसलाइ अरूले अाफुलाइ स्विकारून्, अाफुलाइ सहयाेग गरून्, माया गरून्र, सम्मान गरून् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । तर जव जिवन अगाडी बढ्दै जान्छ, ती अपेक्षा काही गएर टुक्रिएकाे जस्ताे लाग्छ र उ अाफुलाइ एक्लाे महसुस गर्न थाल्छ ।
सबैभन्दा पहिले त याे स्विकार्नुहाेस् की, तपाइ एक्लाे नै हुनुहुन्छ । तपाइसँग भएका साथीहरू, नजिकका भनिएका मान्छेहरूले जतिबेला पनि तपाइकाे साथ छाेड्न सक्छन् । जिवन भनेकाे निरन्तर चलिरहेकाे यात्रा हाे । याे यात्रामा कयाैँ मान्छे भेटिन्छन् र छुट्टिन्छन्।
अाफ्ने दिमागलाइ व्यस्त बनाउनुहाेस् । जब अाफ्नाे दिमागलाइ व्यस्त बनाउनुहुन्छ, तपाइकाे व्यक्तित्व विकास हुन थाल्छ, सकरात्मक साेच अाउन थाल्छन् र डर तथा निराशाहरू घट्न थाल्छन् । पत्रपत्रिका पढ्नुहाेस्, अन्य पुस्तक पढ्नुहाेस्, नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुहाेस्, काम गर्नुहाेस्, नाच्नुहाेस्, गाउनुहाेस्, खाली नबस्नुहाेस् ।
रून मन लागीरहेकाे छ भने एक्लै चिच्याएर रूनुहाेस् । फेरी, तपाइकाे परिवारकाे सदस्य, तपाइका साथी मध्यमा यस्ताे काेही व्यक्ति हुन्छ, जाेसँग तपाइले अाफ्नाे मनमा अाएका कुरा राख्न सक्नुहुन्छ । उनीहरूसँग कुरा गर्नुहाेस् ।
हरेका दिन नयाँ हाे । भाेलीले नयाँ सम्भावना बाेकेर अाउने छ । अाशावादी रहनुहाेस् । अाफुमाथी विश्वास राख्नुहाेस् । भाग्यमा हाेइन, कर्ममा भर पर्नुहाेस् ।र, यदि धेरै दिनसम्म नै अाफुलाइ एक्लाे महसुस गर्नुभयाे या कमजाेर महसुस गर्नुभयाे भने मनाेवैज्ञानिकलाइ भेटेर परामर्श लिनुहाेस् ।
यसकाे बारेमा पनि जान्नुहाेस्ः
कसरी बस्ने ध्यान ?
भनिन्छ, ध्यान हाम्रो स्वभाव हो, जसरी हामी रुन्छौ, हाँस्छौ । त्यसैले यसको अभ्यास आफैमा कठिन भएपनि असम्भव भने छैन । निरन्तर र नियमपूर्वक अभ्यासले हामी ध्यानको अवस्थामा रहन सक्छौ ।
ध्यान कुनै कठिन व्यायाम होइन । यो जटिल आसन पनि होइन । पद्मासनमा वा अर्धपद्मासनमा बसेर गरिने साधरण क्रिया हो । तर, यसका लागि आफुले आफैलाई संयमित राख्न सक्नुपर्छ ।
१. ध्यान गर्नका लागि एकदमै शान्त, स्वच्छ वातावरण आवश्यक हुन्छ ।
२. बिहानको समय सर्वोत्तम हुन्छ, जतिबेला वायुमण्डलमा स्वच्छ हावा चलिरहेको हुन्छ ।
३. शान्त स्थानमा पद्मासन एवं अर्ध पद्मासनमा बस्नुपर्छ । आँखा बन्द गर्नुपर्छ ।
४. अब हामीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो स्वासप्रश्वासमा केन्दि्रत गर्ने ।
५. शुरुमा मन यताउता भड्कन सक्छ, तर संयमित भएर यहि अभ्यास गरिरहने ।
६. यसरी श्वासप्रश्वासमा ध्यान केन्दि्रत गर्ने अभ्याससँगै विस्तारै ध्यानको गहिराइमा पुग्न सकिन्छ ।
Don't Miss it बन्दागोभीको पत्रपत्रले फ्याल्ने रहेछ, हाम्रो सातपत्रका रोगहरु । खान जान्नुहुन्छ तपाई ? सिक्नुहोस्
Up Next विधार्थीले आफ्नाे रिजल्टलाइ कसरी लिने ? जान्रुहाेस्
फ्रिजमा राखेको पानी सिधै पिउने गर्नुहुन्छ भने यस्तो खतरनाक समस्याको शिकार बन्नुहुदैछ
गर्मीको समयमा मानिसहरू प्राय फ्रिजको चिसो पानी पिउन मन पराउँछन् । तर, फ्रिजको पानी सीधै पिउँदा शरीरलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ…
हाम्राे भान्छामा प्रयाेग हुने प्लास्टिकको पन्यूँले बिगार्छ कलेजो
हाम्रो भान्छामा प्लास्टिकका थुप्रै चिज हुन्छन् । चम्चा–काँटा, डाडु–पन्यूँलगायत प्लास्टिकका सामानले कलेजो र थायराइडमा हानि पुर्‍याउने वैज्ञानिकहरू बताएका छन् ।…
आमाबुबाले आफ्नो बच्चालाई पढाईमा मात्रै केन्दि्रत गर्नुहुन्न उनीहरुलाई जीवन उपयोगी सीपहरु पनि सिकाउनु पर्छ । अहिले हामी बच्चालाई स्मार्ट वा…
जाडोमा तेल मसाज गर्नुहोस्, शरीर फिट रहनेछ
हाम्रो शरीरको लागि मसाज एकदम महत्त्वपूर्ण छ । प्रायः यो देखिएको छ कि मालिश केवल नवजात शिशुहरूका लागि गरिन्छ, तर…
छालामा अचानक कसरी देखिन्छ निलो दाग ? यस्ताे छ कारण
हाम्रो शरीरको विभिन्न ठाउमा कहिले कहिँ अचानक रगत जमेको जस्तो निलो दागहरु देखिने गर्छ । यस्तो निलो दाग न चोटपटक…
चीनमा देखिएको नयाँ भाइरस के हाे ? यसले सयौँ मानिसलाई सङ्क्रमित बनाएको हुनसक्ने, पुरा पढ्नुहाेस्
चीनमा देखा परेको नयाँ भाइरस स्वरूप परिवर्तन गरेर फैलन सक्ने चिनियाँ अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । उक्त भाइरस फैलन नदिने…
मानिसलाई बिरामी बनाउने भाइरस कुन समयमा बढी सक्रिय हुन्छ ? जानीराखाै
भाइरस अन्य समयको तुलनामा बिहान १० गुणा सक्रिय हुने एउटा पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । भाइरसले विहान संक्रमण गरेमा अन्य…
हामी बाँच्नका लागि खाना खान्छौ । त्यहि खानाले हामीलाई स्वस्थ बनाएर काम गर्न, हिँडडुल गर्न शक्ति दिन्छ । खाना बिना…